Ukukhonjwa kwe-ruby nge-Glass, i-Fissure egcwele i-ruby - ividiyo
Ingilazi egcwele iruby
Amathegi kugcwalisiwe, Kufakwe ingilazi, Ruby
Ukugcwalisa ukuqhekeka noma izifaca ngaphakathi kwerubhi ngengilazi yomthofu noma into efanayo kuthuthukisa kakhulu ukubonakala kwetshe, okwenza amarubi angafanelekile ngaphambilini alungele ukusetshenziswa kobucwebe. Ukuhlonza i-ruby nge-Glass kulula kakhulu futhi inani layo liyabiza kakhulu kune-ruby engalashwa.
Thenga ingilazi egcwele ingilazi esitolo sethu
Ingilazi yomthofu igcwalise irubhi
Amatshe amabi akhonjisiwe ngaphambi kokuqeda konke ukungcola komhlaba okungathinta inqubo
Itshe elinolaka lihlanzwa nge-hydrogen fluoride
Inqubo yokuqala yokushisa lapho kungafakwa khona okugcwaliswayo. Inqubo yokushisa iqeda ukungcola ngaphakathi kokuqhekeka. Yize lokhu kungenziwa emazingeni okushisa aze afike ku-1400 ° C (2500 ° F) kungenzeka kakhulu ukuthi kwenzeke ezingeni lokushisa elicishe libe ngama-900 ° C (1600 ° F) kwazise usilika we-rutile usaphelele.
Inqubo yokushisa yesibili kuhhavini kagesi enezithasiselo ezahlukahlukene zamakhemikhali. Izixazululo ezahlukahlukene nezinhlanganisela kukhombisile ukuthi kuyaphumelela, kepha kusetshenziswa kakhulu ingilazi-powder eyisihola okwamanje. Irubhi lifakwa emafutheni, labe selimbozwa ngempuphu, lifakwa ku-tile bese lifakwa kuhhavini lapho lifudunyezwa khona cishe ku-900 ° C (1600 ° F) ngehora elilodwa endaweni ene-oxidizing. Impuphu enombala osawolintshi iguqula lapho ishisa ibe unamathisela osobala uye ophuzi, ogcwalisa konke ukuphuka. Ngemuva kokupholisa umbala wokunamathisela ubonakala ngokuphelele futhi kuthuthukisa ngokumangazayo ukubonakala okuphelele kwerubi.
Uma umbala udinga ukwengezwa, i-powder yengilazi "ingathuthukiswa" ngethusi noma amanye ama-oxide ensimbi kanye nezinto ezifana ne-sodium, calcium, potassium njll.
Inqubo yokushisa yesibili ingaphindwa kathathu noma kane, ngisho nokufaka imixube ehlukene. Lapho ubucwebe obuqukethe amarubi kuyashiswa ukuze kulungiswe. Akufanele ifakwe i-boracic acid noma enye into, ngoba lokhu kungabeka indawo ebusweni. Akudingeki ukuthi ivikelwe njengedayimane.
Ukukhonjwa kwe-ruby engilazi
Ukwelashwa kungabonakala ngokuqaphela amabhamuza emigodini nasemifantwini kusetshenziswa i-10 × loupe.
Ngingazi kanjani ukuthi i-ruby igcwele ingilazi?
Isici esibonakalayo esaziwa kakhulu se-ruby eyinhlanganisela amabhamuza wangaphakathi wegesi. Lokhu kungaba yimikhakha eyodwa noma amafu amagwebu, acabalele noma ayisiyingi, futhi akhona cishe kuwo wonke amarubi agcwalisiwe. Ezimweni eziningi, ziyabonakala ngisho nasemehlweni angenabani.
Ingabe ingilazi igcwaliswe ngeRuby yemvelo?
Yebo, kuyitshe eliphathwayo. Idalwe kusetshenziswa ukushisa nento yokuletha umbala obomvu ojulile njenge-ruby engalashwa, Itshe eliyigugu liyelashwa ukugcwalisa ukuqhekeka okukhona etsheni. Lawa magugu abukeka njengamatshe angalashwa, kepha awahambelani namandla nokuqina onakho amatshe angempela.
Ingabe ingilazi egcwaliswe ngamarubi ayinalutho?
Inani le-ruby eligcwele ingilazi lishibhile kakhulu kune-ruby engalashwa. Ukusebenza kokwelashwa kuyamangalisa, ngoba kuguqula i-corundum ebonakala kahle futhi ecishe ingabi nalutho ibe yinto ebonakalayo esobala ngokwanele ukuthi ingasetshenziswa kubucwebe. Ngempela, amatshe angabonakala ekhanga kakhulu kumthengi ongafundwanga. Kungaba eshibhile izikhathi eziyishumi kuya kwezinkulungwane kunetshe elifanayo elibukeka lingelashwa.
Thenga ingilazi egcwele ingilazi esitolo sethu segem
Senza ubucwebe ngokwezifiso nge-fissure egcwele i-ruby njengendandatho, amacici, isongo, umgexo noma umhlobiso.
Amathegi Ruby, Trapiche
Amathegi Ruby, inkanyezi
I-synthetic star ruby
Amathegi Ruby, inkanyezi, Isakhi
Amathegi Anyolite, Ruby, Zoisite